के हो पिसाब सङ्क्रमण ? यसको लक्षण र बच्ने उपाय बारे जानीराखौँ - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»के हो पिसाब सङ्क्रमण ? यसको लक्षण र बच्ने उपाय बारे जानीराखौँ
के हो पिसाब सङ्क्रमण ? यसको लक्षण र बच्ने उपाय बारे जानीराखौँ
By शर्मिला गुरुङ on २९ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०८:१३ स्वास्थ्य/जीवनशैली
काठमाडौँ, २९ भदौ : के तपाईँलाई शरीर चिलाउँछ, योनी पोल्ने र पिसाब फेर्दा दुख्ने समस्या छ । यदि छ भने तपाईंलाई पिसाब सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ । यस्तो समस्या भएमा हेलचक्ताइँ नगरी चिकित्सक कहाँ उपचारका लागि जानु आवश्यक छ ।
फोहोर चर्पी प्रयोग गर्दा, भित्री कपडा, महिनावारीमा प्रयोग कपडा पनि सफा नभएमा पिसाबसम्बन्धी सङ्क्रमण हुने चिकित्सकको भनाइ छ । पर्याप्त पानी पिउने, योनी सफा राख्ने, पिसाबलाई धेरै समय नरोक्ने, चिलाउने, पोल्ने समस्या भएमा चिकित्सकलाई देखाउने गर्नुपर्छ । कल्पना पौडेल, रासस